Orinasa mpamokatra fandoroana sinoa | LYBH
Amin'ny maha fitaovana fampidirana elektromekanika misy automatique avo lenta azy, ny burner dia azo zaraina ho rafitra dimy: ny rafitra famatsiana rivotra, ny rafitra fandrehitra, ny rafitra fanaraha-maso, ny rafitra solika ary ny rafitra fanaraha-maso elektronika.
Ny fiasan'ny rafitra famatsian-drivotra dia ny famahanana ny rivotra miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra sy ny habeny ao amin'ny efitrano fandoroana. Ireo singa fototra ao aminy dia: akorandriaka, motera fan, fanamafisam-peo, fantsom-basy, fifehezana damper, baffle damper, mekanisma mifehy ny CAM ary kapila fanaparitaka.
Ny rafitra fandrehitra
Ny fiasan'ny rafi-pamokarana dia ny mampirehitra ny fifangaroan'ny rivotra sy ny solika. Ny halavan'ny lelafo, ny zoro ary ny endrika dia azo foronina arakaraka ny zavatra takian'ny mpampiasa.
Ny fiasan'ny rafitra fanaraha-maso dia ny fiantohana ny fandriam-pahalemana sy miorina amin'ny fandoroana. Ireo singa fototra ao aminy dia ny fanaraha-maso ny lelafo, ny fanaraha-maso ny tsindry ary ny fanaraha-maso ny mari-pana.
Ny rafitry ny solika
Ny fiasan'ny rafitry ny solika dia ny manome antoka fa mandoro ny solika ilaina ilay may. Ny rafitry ny solika fandrehitra solika dia ahitana indrindra: fantson-tsolika sy mpiray, paompy solika, valizy solenoid, noza, preheater solika mavesatra. Ireo mpandoro entona dia ny sivana, mpanara-maso, vondrona valizy solenoid, vondrona valizy solenoid ignition, valizy lolo solika.
Ny rafitra fanaraha-maso elektronika dia ivon-kaomandy sy ivon'ny fifandraisana amin'ireo rafitra etsy ambony. Ny singa fanaraha-maso lehibe indrindra dia ny mpanara-maso ny programa, izay misy programa samihafa ho an'ny mpandoro samihafa. Ny programa mahazatra dia misy: andiany LFL, andiany LAL, andiany LOA ary andiany LGB.
1. Fandoroana tanteraka, afaka mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny tsindry, ny fizarana rivotra mifehy tena indray mandeha, ny fandoroana tanteraka.
2. Fahombiazan'ny fiarovana tsara.
3. Ny rafitry ny solika dia mifehy ny fivoahan'ny solika mba hampihenana ny fanjifana.
4. Ny rafi-pitantanana herinaratra dia mamafa ny rivotra ao anatin'ny 30 segondra, izay mety, haingana, azo antoka ary milamina.
5. Ny akorandriaka hafanana matevina dia afaka miaro ny masinina amin'ny fahasimbana, mampandeha tsara ilay milina ary manalava ny androm-piainany.
Teo aloha: Fividianana fividianana zavamaniry ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny gazo - Fambolena pyrolysis fako ao an-trano - LYBH
Manaraka: fanafanana fipoahana mafana
Fatana mafana-fipoahana lasantsy
Fatana solika ho an'ny fanafanana
Fatana fipoahana mafana mitsivalana
Heater mafana mafana
Fambolena Pyrolysis mitohy, Masinina fanodinana plastika, Batch Pyrolysis Plant, Tyro Pyrolysis, Fanadiovana plastika maloto, Masinina fanodinana fako,